Fandefasana iraisam-pirenena - Lighting Bias MediaLight
Ny fandefasana anay iraisam-pirenena dia misy ny haba, haba ary haba rehetra, anisan'izany ny VAT. Tsy hanan-trosa hafa ianao rehefa voateraka ny kaontinao.
Mandefa iraisam-pirenena izahay amin'ny alàlan'ny FedEx Priority International (2-6 Andro) ary ambany dia ambany ny tahanay. Miorina amin'ny toerana onenanao sy ny habe ary ny lanjan'izay andoavanao ny isa.
Raha mampiasa mpandefa entana ianao dia azafady azafady fa raha atolotra ho an'ny mpandefa entana ny fonosana iray dia heverina ho voateraka na dia very ilay entana aza ny mpandefa azy. Ny ankamaroan'ny olana dia mifandraika amin'ny fandefasan'ny mpitatitra entana, fandefasana entana ary fanimbana entana. Mitranga matetika izany ka hitondrantsika azy ankehitriny.
Misy ihany koa ny fetran'ny fiantohana izay azo ampiharina amin'ny fandefasana entana, misy fiantraikany amin'ny fandefasana ny faritra fanoloana anao, ary izay tsy mihatra rehefa mampiasa ny safidin'ny fandefasana iraisam-pirenena ianao. Vakio ny pejy garage ho an'ny antsipirihany bebe kokoa.